२०७८ कार्तिक १ सोमबार ११:००:००
काभ्रे जिल्लाको बेथानचोक गाउँपालिका वडा नं. ५ स्थित कामीडाँडामा फुटबल खेल्ने क्रममा आयोजक र खेलाडीबीच विवादपछि हानाहान हुँदा दुईजना घाइते भएका छन् । सक्रिय समाजसेवी युवा क्लबको आयोजनामा ‘बेथानचोक महाभारत फुटबल कप’ असोज २३ गतेबाट सुरु भएको थियो । उक्त खेलमाआइतबार आयोजक र खेलाडीबीच झगडा भएको हो।
ढुङखर्क प्रहरी चौकीका अनुसार झगडा भई दुवै पक्षबीच ठेलमठेल गर्दा भिरबाट खसी फुटबल खेल आयोजक सक्रिय समाजसेवी युवा क्लबका सचिव बेथानचोक गाउँपालिका– ६ का ३१ वर्षीय नीरविक्रम लामाको दुईवटा करङ भाँचिएको र खेलाडी बेथानचोक गाउँपालिका– ४ का २६ वर्षीय रघुवीर तामाङका दुवै खुट्टा भाँचिएका छन् ।
उनीहरूको अवस्था मध्यम रहेको प्रहरीले जानकारी दिएकाे छ । खेलाडी तामाङलाई धुलिखेल अस्पतालमा र आयोजकका सचिव लामाको काठमाडौंस्थित अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार वडा नं. ४ खेलमा हारेकाे थियाे । उक्त वडाका खेलाडीहरूले हारेको टिम पनि खेल्न पाउनुपर्छ भन्ने माग राखेका थिए । तर, आयोजकले भने मानेका थिएनन् । त्यही विषयमा झगडाले उग्र रूप लिँदै जाँदा ठेलाठेल गर्ने क्रममा घटना घटेको प्रहरीले जनाएको छ ।
श्रीमान्–श्रीमतीको झगडा छुट्याउन आएका छिमेकीको हत्या, चारजना पक्राउ
देउवाको निष्कर्ष : नेकपाको झगडाले कांग्रेसमा समस्या
घरभित्रकाे झगडाकाे बहाना देखाएर ओलीले घर नै सखाप पारे : माधव नेपाल